ရုရှားနိုင်ငံ၏ TASS သတင်းအေဂျင်စီက အာကာသတွင် ရုံးခန်းဖွင့်မည် - Xinhua News Agency
ရုရှားနိုင်ငံပိုင် အာကာသကော်ပိုရေးရှင်း Roscosmos ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Dmitry Rogozin အား ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် စိန့်ပီတာဘာ့ခ်မြို့၌ တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ် (ဆင်ဟွာ)
မော်စကို၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဦးဆောင်သတင်းဌာနဖြစ်သော TASS သတင်းအေဂျင်စီသည် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း (ISS) တွင် အမြဲတမ်း ကိုယ်စားပြုရုံးဖွင့်ရန် နိုင်ငံပိုင်အာကာသကော်ပိုရေးရှင်း Roscosmos နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချွန်လွှာတစ်စောင်အား နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်က လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“အာကာသမှာ ပထမဆုံးသတင်းထောက်ကတော့ ရုရှားသူရဲကောင်း Roscosmos cosmonaut Alexander Misurkin ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Roscosmos အကြီးအကဲ Dmitry Rogozin နှင့် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက် TASS အကြီးအကဲ Sergei Mikhailov က ပြောကြားခဲ့သည်။
Misurkin သည် စီးပွားရေးမစ်ရှင်တစ်ခုအတွက် Soyuz MS-20 အာကာသယာဉ်နှင့် လိုက်ပါရန် ဂျပန် ဘီလျံနာနှင့် ၎င်း၏စီးပွားရေး ကူညီပေးသူတစ်ဦးနှင့်အတူ ISS အတွက် ကာဇက်စတန်နိုင်ငံ Baikonur Cosmodrome သို့ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်၌ ထွက်ခွာရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
“ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ရုရှားအာကာသယာဉ်မှူး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအတွက် အလွန့်အလွန်ဂုဏ်ယူဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အာကာသကနေ သတင်းတွေနဲ့ အံ့ဖွယ်ရိုက်ကူးရေးတွေကို မျှော်လင့်ထားပါတယ်” ဟု Mikhailov က ဆိုသည်။
အဆိုပါ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်သည် “ငွေကြေးဖြုန်းတီးခြင်း” မဟုတ်ကြောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Roscosmos အာကာသယာဉ်မှူးများသည် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို တက်တက်ကြွကြွ မှတ်တမ်းရိုက်ကူးဖော်ပြလျက်ရှိကြောင်း Rogozin က အခမ်းအနား၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
အသေးစိတ်ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ဆောင်ပြီးနောက် နိုင်ငံပိုင် အာကာသကော်ပိုရေးရှင်းသည် Mikhailov ၏ စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့် အရေးကြီးသောအဆိုပြုချက်ကို လက်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်ပမှာရှိတဲ့သူတိုင်းကို အာကာသစူးစမ်းလေ့လာမှုကို နားလည်ဖို့ အမှန်တကယ် အလိုရှိတာကတော့ ကြောက်ရွံ့မှု၊ မယုံကြည်မှုနဲ့ လျစ်လျူရှုမှုတွေကို ကျော်လွှားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ထိတွေ့ဖို့ ပြည်သူတွေ အနည်းငယ်ရဲရင့်လာချိန်မှာ လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး၊ ကျွန်တော်တို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးကို ထောက်ထားပြီးတော့ အာကာသဟာ ဒါပါလားဆိုတာ ပြသလိုတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု Rogozin က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
Russia’s TASS news agency to open office in space
Source: Xinhua| 2021-11-17 23:20:36|Editor: huaxia
MOSCOW, Nov. 17 (Xinhua) — Russia’s leading TASS news agency signedamemorandum of cooperation with the state space corporation Roscosmos on Wednesday to openapermanent representation on the International Space Station (ISS).
“The first correspondent in space will be Hero of Russia, Roscosmos cosmonaut Alexander Misurkin,” TASS head Sergei Mikhailov said after inking the document with Roscosmos chief Dmitry Rogozin.
“It is an incredible honor for us to call our Russian cosmonauts colleagues. We look forward to news and amazing footage from space,” Mikhailov said.
“We really want everyone in our country and abroad to understand that space exploration is about overcoming fear, disbelief and ignorance. Whenafew very courageous people engage in it, I would like this to be for the sake of all mankind, our entire society, showing space as it is,” said Rogozin. Enditem
Dmitry Rogozin, director general of Russia’s state space corporation Roscosmos, speaks during an interview with Xinhua in St. Petersburg, Russia, June 15, 2021. TO GO WITH “Interview: Russia ready to foster cooperation with China in space, says Roscosmos head” (Xinhua/Yuan Xinfang)